Kuwani ma yihiin caadooyinka guurka kuwooda ugu yaabka badan?? | Filimside
Home ARRIMAHA BULSHADA Kuwani ma yihiin caadooyinka guurka kuwooda ugu yaabka badan??
Layaabka aduunka ka dhaco waayadaan dambe wax iska caadi ah ayuu noqday iyadoo marba marka kasii dambeyso kor u kacayaan.
Waagii hore ma jirin tiknoolijiga maanta jira sidaas owgeed umadaha aduunka ma aheyn kuwa iska war qaba dhaqan ahaan iyo caado ahaan balse maanta umad kasta dhaqankeeda si fudud ayaad ku ogaan kartaa.
Dhaqamada aduunka wey badanyihiin waxaana kamid ah guurka oo ah dhaqan sidoo kalana ah wax diinta baneysay.
Guurka dhaqamo badan ayuu leeyahay tusaale anaga soomaali ahaan arooska iyo aroosada waxaan u dhignaa todobo bax sidoo kalana waxaa jiraan wax la dhaho sadax.
Aduunka markii la joogo arooska iyo aroosada waxaa lagu galbiyaa kaliya hal baabuur oo la qurxiyay kaasoo uu arooska wadaayo lkn soomaalideena taas waa ka duwanahay oo waxaan isku galbinaa gawaari tiro badan.
Balse waxaa jiraan dhaqamo kale oo aduunka laga isticmaalo balse ka soomaali ahaan hadaad maqasho afka ayaad qabsaneysaa.
Dhaqamadaas waxaa kamid ah in habeenka aqal galka aroosada la afduubto iyadoo arooskana laga doonayo inuu aroosada soo furto si uu ula aqal galo.
Sidoo kale waxaa jiro dhaqan ah in keega arooska markuu arooska dhaco la barafeeyo oo meel la dhigo iyadoo lala sugaayo inta arooska iyo aroosada caruur uga dhalanayaan waxaana la sameynaa kolkii caruurta dhashaan ayaa keegaas lasoo bixinaa dibna loo cunaa iyadoo loogu dabaal dagayo dhalashada cunugooda.
Sidoo kale waxaa kamid ah in habeenka aqal galka arooska iyo aroosada muusik lagu kor garaaco si aan jabaqdooda iyo shanqartooda loo maqlin ilaa waagu ka baryayo.
Waxaa kaloo jira dhaqan layaab leh kaasoo ah in arooska iyo aroosada ehelkooda isku yimaadaan isla markaasna qolka arooska lasoo buux dhaafiyo waxayna goob jog iyo marqaati u ahaanayaan kulanka aqal galka wiilka iyo gabadha.
Hadaba akhristow dhaqamdaan midkee si gooni ah kaaga yaabiyay mase jiraa dhaqan guurka ku saabsan oo ka yaab badan kuwaan??
Previous articleSalman Khan”Katrina Kaif Waxay Joogtaa Boos Ay Si Awood Ku Dheehan John Abraham Film Kaga Saari Karto Maxuu Yahay John-ka Sheegeyso” Wareysi Xiiso Leh Nala Akhriso (+Sawiro)
Next article8 Aktar Kuwaaso Iska Diidayn Aflaamo Caan Ah